धरानमा होम आइसोलेसन कति सुरक्षित ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
होम आइसोलेसन बहस
धरानमा होम आइसोलेसन कति सुरक्षित ?
धरानमै छन् ३० जना होम आइसोलेसनमा तर अझै समस्या, ८ जनाले घरमै जिते
धरानः धरान–१० की एक संक्रमित नर्स अहिले होमआइसोलेसनमै छिन् । उनले अस्पतालभन्दा घरमै बढी स्याहारसुहार हुने महसुस भएको बताइन् । ‘खासमा अस्पतालमा भन्दा घरमै स्याहारसुसार हुने महसुस मैले गरेकी छु’, उनले फोन सम्पर्कमा भनिन्, ‘अहिले सबैजना आफन्तले कसरी निको बनाउने भन्नेबारेमा सोधपुछदेखि सरसल्लाह पनि दिइरहनुभएको छ । यसले पनि थप मनोबल बढेर जाने रहेछ ।’ उनले गुनासो पनि पोखिन्, ‘म आफू त स्वास्थ्यकर्मी भएको हिसाबले सजिलो होला तर अन्यलाई केही गाह्रोसाहो भए चाहिँ अप्ठ्यारो नि, कोही सरसल्लाह दिने स्वास्थ्यकर्मी त हुँदैनन् ।’
धरानमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन् । धरानमा हालसम्म १७३ जनामा कोरोना पुष्टि भइसकेको छ । छोटो समयमा नै धरानमा यतिका संख्यामा कोरोना संक्रमित पुगेका हुन् । धरानमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताले धरानमा मंगलबारसम्म ३० जना कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको जानकारी दिए । यस्तै, होम आइसोलेसनबाटै निको हुनेको संख्या ८ जना रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै, अस्पतालमा ७० जना रहेका छन् । यस्तै, अस्पतालबाटै डिस्चार्ज हुनेको संख्या ५७ रहेको छ ।
पछिल्लो दिनमा आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य महाशाखाकै तथ्यांकले पुष्टि गरिसकेको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. निदेश सापकोटा लक्षण नदेखिएका बिरामीलाई भरसक घरमै बस्न सल्लाह दिँदै आएको बताए । ‘हामीले लक्षण नभएका संक्रमितलाई सकेसम्म ठाउँ व्यवस्थापन गरेर आफ्नै घरमा बस्न आग्रह गर्दै आएका छौं र उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखाका पदाधिकारीलाई पनि त्यही भन्ने गरेका छौं तर घरमा बस्दा नियम पालना भने गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
आफ्नै घर हुनेहरु र छुट्टै व्यवस्थापन गर्न सक्नेहरुका लागि लक्षण नदेखिए होम आइसोलेसन उपयुक्त हुने उनको तर्क छ । ‘कुनै बेला भयानक अवस्था आएर आइसोलेसन सेन्टर नै नपाउने अवस्था पनि हुन्छ । त्यस्तो बेला के गर्ने त ? त्यसको लागि अहिलेदेखि नै ‘प्राक्टिस’ हुनुपर्छ ।’
सरकारले पनि होम आइसोलेसनको लागि मापदण्ड तयार गरेको छ । सो मापदण्ड पालना नगरेमा घरबाट परिवार, परिवारबाट समुदायमा कोरोना फैलने जोखिम हुने विज्ञहरू बताउँछन् । उनका अनुसार अनुसार संक्रमितले नियम पालना नगर्ने र सरकारको निगरानी भएन भने सोचेको भन्दा बढी भयावह अवस्था आउन सक्छ ।
उनले घरमा रहेका संक्रमितले कति नियम पालना गरे नगरेकोबारेमा अनुगमन भने हुनुपर्ने बताए । ‘होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारले नियमित निगरानी गर्नुपर्छ । घरमा रहेका संक्रमितलाई जटिल भएमा तुरून्त अस्पताल ल्याउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
अस्पतालमा धेरै मानिसहरुको आवतजावत हुने र अन्य संक्रमणको जोखिमसमेत हुन सक्ने हुँदा नियमहरुको पूर्ण पालनासहित होम आइसोलेसनमा बस्नु उपयुक्त हुने धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मेहता बताउँछन् ।
‘आफ्नै घरमा चाहेको समयमा खाना, खाजा, पानीलगायत सरसफाइ गर्न सकिन्छ, आइसोलेसन अस्पतालहरुमा पनि ठिकै होला तर लक्षण नदेखिए त घर मै उपयुक्त हुन्छ ।’ उनले थपे, ‘अहिले घरमै बसेर कोरोना जितेका अनुभव सुन्दा घरमै ठीक भन्दै आएको पाइयो ।’ उनले नियम पालनाका लागि परिवारसँगै भेट्दै नभेट्ने गर्नुपर्ने सुनाउँछन् । ‘परिवारसँग कुनै न कुनै अवस्थामा डाइरेक्ट भेट्ने पनि हुनसक्छ तर यस्तो बेलामा त जोखिम बढिहाल्छ नि । कुनै पनि पल सावधानी हट्नु हुँदैन । अन्यथा परिवारसमेत जोखिममा हुन्छ । त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।
धरानमा कस्तो छ ?
मलाई केही लक्षण पनि छैन भनेर संक्रमित घरबाट निस्किए भने अर्थात् परिवारसँग बढी हेलमेल हुन थाले भने स्थिति के होला ?
तर अधिकांश होम आइसोलेसनमा बस्ने संक्रमितकहाँ एकजना पनि स्वास्थ्यकर्मीले हेरचाह, सरसल्लाह नगरेको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ । धरानका एक संक्रमित भन्छन्, ‘म होम आइसोलेसनमा बसेको १० दिन भयो, कसैले केही पनि भनेको छैन तर म मा केही समस्या भने छैन ।’ खासमा हेरचाह, सरसल्लाहसहित अनुगमन पनि हुनुपर्ने हो तर त्यो पनि भइरहेको छैन ।
स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरुको प्रत्यक्ष निगरानीमा होम आइसोलेसनमा बस्नेहरुको निगरानी हुने गरी निर्देशिका तयार भएको छ । हरेक स्थानीय तहले ५० जना संक्रमितका लागि १ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरले व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर धरानमा अझै यस्तो व्यवस्था हुन सकेको छैन । महाशाखा प्रमुख मेहताले अब धरान उपमहानगरपालिका पनि तयारीमा जुटेको बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले जुम र फोनमार्फत् केही सेवा दिएपनि सबैका लागि पर्याप्त भने भइसकेको थिएन, त्यही भएर आजदेखि हामी यस्तो व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौं ।’
उनले अनुगमन हुन नसकेको भने स्वीकारे । ‘खासमा फोन र जुममार्फत् के कस्तो भइरहेको छ भन्नेबारेमा मात्रै जानकारी लिइन्थ्यो अब घरमै स्वास्थ्यकर्मी पठाउने र अनुगमन गर्ने गरी काम थाल्दैछौं ।’
धरानस्थित मेडिकल स्टुडेण्टस टिमले ‘एकजना कोरोना बिरामीको लागि एक जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन’ को अवधारणा अघि सारेको टिमका सशांक ताम्राकार बताउँछन् । ‘होम आइसोलेसनमा एक्लै बस्नुपर्दा मानसिक तनाव हुनसक्छ । स्वास्थ्यकर्मी हुँदा मानसिक रुपमा उहाँहरूलाई हौसला मिल्छ, त्यस्तै, पोष खानेकुरा, अप्ठ्यारो परे हामी छौं भन्ने हौसला दिइन्छ, मानसिक तनावलाई कम गर्दै आत्महत्या रोक्न सकिन्छ, १४ दिन वा सो भन्दा बढी दिनको होम आइसोलेसन अवधिभर फलोअप गरी उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न सकिन्छ, त्यसैले यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।’
उनी संक्रमितलाई टोलछिमेकले गर्ने व्यवहार सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि स्वास्थ्यकर्मीले थप जनचेतनाका कामहरू पनि गर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार होम आइसोलेसनमा बस्दा अर्को समस्या सामाजिक भेदभाव पनि हो । ‘यस्तो सामाजिक भेदभावबारे जनचेतना फैलाउन सकियो भने ठूलो कुरा हो,’ उनले थपे, ‘यति मात्रै होइन संक्रमणमुक्त भइसकेपछि पनि अझै ठूलो भेदभाव हुँदै आएको छ, त्यस्ता कुरा रोक्न सकिन्छ ।’
स्वास्थ्यकर्मीहरूले स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा सिकाउँदा अन्यमा कोरोना नसर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसरी स्वास्थ्यकर्मी रहँदा के खाने, के नखाने, औषधिहरू के चाहिने, के खाने, नखाने आदिबारे परामर्श पनि मिल्छ अनि बिरामी छिट्टै निको पनि हुन्छन् ।’ उनी भन्छन् ।
चिकित्सकका अनुसार घरको आइसोलेसनमा बस्नेहरू पर्याप्त प्रकाश आउने, हावा खेल्ने छुट्टै कोठा हुनुपर्ने, संक्रमणमुक्त नभएसम्म बाहिर निस्कनु नहुने, स्नान घर तथा शौचालयको पनि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस्तै, चिकित्सकका अनुसार संक्रमितलाई घरमा रहेका ६० वर्षमाथिमा व्यक्ति, दीर्घरोगी र बालबालिकाबाट टाढा राख्नुपर्छ ।
टिमका सदस्य फेमी लिम्बूले एकजना कोरोना बिरामीको लागि एकजना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुनुपर्ने बताइन् । समूहले अहिले आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन तथा परामर्श अभियान चलाउन थाल्ने उनले जानकारी दिए । ‘यो अभियान पहिलोपटक हो’, उनले भनिन्, ‘हामीले स्वास्थ्य परामर्श, चेतनामूलक कार्यक्रम साथै होम आइसोलेसनको बेला पोषणयुक्त खानासम्बन्धी जानकारी गराउँदै आएका छौं, यसले होम आइसोलेसनमा बस्नेलाई थप सहजता प्रदान गर्दै छिटो निको हुन सहयोग पुग्नेछ ।’
समूहका ८० जना युवायुवतीले यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीबारे जनचेतना साथतै साथै रोकथाममा धरानेको भूमिकाबारे घर घरमा पुगेर सचेतना समेत फैलाएको थियो । त्यस्तो सचेतना कार्यक्रमले धरानमा आत्महत्या रोक्न समेत सहयोग पुगेको उनले बताइन् ।
धरान उपमहानगरपालिकामा होम आइसोलेसनबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा समूहका विद्यार्थी । फोटोः लक्ष्मण थापा